गोली हानी फरार व्यक्ति हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ
मकवानपुरका शरण गोलेलाई गोली हानी फरार भएका व्यक्ति हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले गोलेलाई गोली हानी फरार रहेका मकवानपुरका मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ५ का ३२ बर्षिय राम बहादुर मुक्तान र उनकी श्रीमती ३० वर्षिय दिल माया मुक्तानलाई विभिन्न हातहतियार सहित पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले गोलेलाई माघ २४ गते मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका वडा नं.९मा रहेको सानो भावर जंगलमा गाली प्रहार गरेका थिए । छातीमा गोली लागेका गोलेको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार माघ २४ गते बेलुकीको समयमा जंगलमा गोली प्रहार भई एक जना घाईते भएको भन्ने सूचना फोन मार्फत आएपछि प्रहरी त्यसतर्फ जाँदा घटनास्थल नजिकै ना ४० प ६२१५ नं. मोटरसाईकल जलेको अबस्थामा भेटिएकोले उक्त मोटर साईकल कस्को भन्ने अनुसन्धान गर्दा मनहरी गाउँपालिका वडा नं. ५ डिल्लीपुर बस्ने राम बहादुर मुक्तान र उनको श्रीमती दिलमाया मुक्तानको रहेको खुलेको थियो । प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ तथा छानबिन गर्दा राम बहादुर मुक्तानले आफुहरु चढेर आएको उक्त मोटरसाईकल सानो भावर जंगल नजिक बाटोमा रोकी राखेको अवस्थामा शरण गोले तथा राजु भन्ने राज कुमार तामाङ मोटरसाईकल चढी आई बिच बाटोमा मोटरसाईकल रोक्ने को हो भनि अपशब्द बोली एक थप्पड हानेकोले दुवै बिच बाद बिवाद भई हातपात हुँदा आफुले बोकेको नलकटुवा पेस्तोलबाट शरण गोलेलाई एक राउण्ड गोली प्रहार गरेको बताएका छन् । उक्त नलकटुवा पेस्तोल जंगलमा नै फालि दिएको उनले बताएका थिए । प्रहरीको टोलीले उक्त पेस्तोल खोजी गर्ने क्रममा जंगलमा रहेका बालुवा भित्र एसएल आर राइफलको गोली एक थान, ३०३ राईफलको गोली एक थान फेला परेको थियो । तर उक्त स्थानमा उनले चलाएको हतियार फेला नपरे पछि पुन सोधपुछ गर्दा उनले आफ्नो घर खानतलासी हुन सक्ने आशंका गरी आफ्नो ससुराको घर लुकाई राखेको बयान दिएका थिए ।
प्रहरीले उनको ससुराली गोपीलाल रुम्बाको घर खानतलासी गर्दा घरको माथिल्लो तलामा बोरा भित्र लुकाई छिपाई राखेको गोले माथि प्रहार भएको नलकटुवा पेस्तोल ,तयारी अवस्थाको कुकर बम एक थान ,ईन्सासको गोली राउण्ड दुई थान , आठ एमएम लेखेको गोली राउण्ड दुई थान, कुकर बम पड्काउने रिमोट एक थान, सुतली बम दुई थान, बारुद आधा किलो , डेटकट आधा मिटर , डेटोनेटर ६ थान, पहेंलो गन्धक पदार्थ एक थान, म्यासेल लेखेको व्याट्री दुई थान , गाडीको बेरिङ्गको छर्रा ११ थान, रडको टुक्रा पाँच थान ,कैची एक थान, कालो टेप एक थान, रेती एक थान , खाक्सी आधा मिटर, नेपाली सेनाका जस्तो हरियो कम्ब्याड ड्रेस थान एक थान वरामत गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।